SOEMOEKYAW: ပျော်ရွှင်ခြင်း ဘယ်ဆီမှာ..?
အိုသွေးနဲ့ အေသွေးအမျိုးစားလူနှစ်ဦးရဲ့မီတာ ၅ဝဝဝ အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ ပညာရှင်တချို့က စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ကြတယ်။ စစ်တမ်းအရ လမ်းတစ်ဝက်မှာ အိုသွေးလူက “ကောင်းလိုက်တာ.. မီတာ ၃ဝဝဝ တောင် ငါပြေးခဲ့ပြီ” လို့ ပြောတယ်။ အေသွေးလူက “ဟင်း.. မီတာ၂ဝဝဝ တောင် လိုသေးတယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်။
တစ်ခါက ကလေးတွေ ထမင်းစားနေတုန်း ကျွန်မဟင်းရည်တစ်ခွက် သယ်လာတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ ဟင်းရည်က စားပွဲပေါ်မှာ မှောက်သွားခဲ့တယ်။ (ကျွန်မက ဘာလုပ်လုပ် အသေးစိတ် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူပါ) “ဟာ.. ဒီနေ့တော်တော် ထူးဆန်းတာပဲ။ မေမေ ဟင်းရည်တွေ မှောက်ချမိပြီ။ ထီသွားထိုးဦးမယ်” လို့ ကလေးတွေကို ကျွန်မပြောတော့ သူတို့လေးတွေရယ်ကြပြီး ကျွန်မကို ကူသိမ်းပေးကြတယ်။
“အာဟာရစွပ်ပြုပ်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ကျွန်မဖတ်မိတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်က ဒီလိုဆိုထားပါတယ်။ မိခင်တစ်ဦးဟာ အလုပ်မှာ စိတ်မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သားကလည်း ကျောင်းမှာ မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ မိခင်က “သား လာကွာ.. စိတ်မကျေနပ်မှုတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ မေမေတို့ McDonalds သွားစားကြရအောင်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ခွဲစိတ်ခန်းမကြာခဏဝင်ရတဲ့ကျွန်မ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လူနာသတင်းမေးဖို့ ရောက်လာကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို “ငါမသေနိုင်သေးပါဘူးကွာ.. လူ့ပြည်ကအိမ်စာတွေ ငါမပြီးသေးလို့ ဘုရားသခင်က ငါ့ကို ကောင်းကင်ဘုံပေါ်ပေးမတက်သေးဘူး” လို့ သူတို့ကို ကျွန်မစနောက်ခဲ့တယ်။
မနှစ်က နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ခွဲစိတ်ခံပြီးနောက် ကျွန်မရဲ့လှုပ်ရှားမှုတချို့ဆုံးရှုံးကုန်တယ်။ ကျွန်မအတွက် စိတ်မကောင်းကြတဲ့ မိတ်ဆွေတချို့ကို “ဒီလို မကြာခဏအဖျားနာတဲ့အတွေ့အကြုံက လူတွေကို ဘယ်လိုကူညီရမယ်၊ ဘယ်လို ကရုဏာထားရမယ်၊ ဘယ်လို ကိုယ်ချင်းစာရမယ်ဆိုတာကို ငါပိုနားလည်ခဲ့တယ်” လို့ နှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်။
“ဘာဖြစ်လို့ မိုးရွာရတာလဲ”လို့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို “မိုးရွာမှ သစ်ပင်တွေရေအခမဲ့ချိုးရမယ်။ ပြီးတော့ ငါတို့လည်း သိပ်မပူတော့ဘူး။ မပူတော့ ပန်ကာဖွင့်စရာမလိုဘူး။ မီတာခ သက်သာတာပေါ့” လို့ ကျွန်မပြောပြလိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်း အဲဒီကလေးဆီကနေ မိုးရွာတာကို မကျေနပ်တဲ့အသံ မကြားရတော့ဘူး။ ဟာသဉာဏ်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်သလို ကိုယ့်ဘေးက လူတွေကိုလည်း ပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်တယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းလည်း ပေါများနိုင်တယ်။ ဘာကြောင့် ကျွန်မတို့ မပျော်ရွှင်မှာလဲ?
“ဘာကြောင့် လူတွေ ပိုပျော်ရွှင်ရတာလဲ?
အမေရိကား နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ Dale Carnegie ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ ဖိအားကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ အချက်(၃ဝ)ချက်ထဲမှာ အချက်တစ်ချက်က “ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကံကောင်းခြင်းကို တွက်ချက်ကြည့်ပါ” တဲ့။ ကျွန်မတို့က ကိုယ်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းအစား ကံမကောင်းတာကိုပဲ တွက်ချက်ခဲ့ကြတယ်။ စိတ်ပျက်အားငယ်မှုကို ခံရတဲ့အခါ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ ထရပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအခက်အခဲထဲကနေ ကံကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတချို့ကို ကျွန်မတို့ မြင်ကောင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by စိုးမိုး at 9:55 AM